Mini induction heater-handheld induction heater-ephathekayo heater
Ikhaya / I-Heater Induction Heater / i-mini ductor induction heater / Mini inductor heater
Categories: I-Heater Induction Heater, Induction Efaka I Heater, Isingeniso sokushisa i-boiler, i-mini ductor induction heater Tags: i-handheld induction heater, I-HLQ heater heater, Ukukhishwa kwe-induction, induction heater umklami, induction heater umenzi, umphakeli we-heater, i-mini induction heater, i-heuction induction yeselula, i-heater etholakala kalula, i-heater encane yokungeniswa
I-Mini inductor heater-encane handheld ductor heater-Magnetic Inductor ithuluzi ikhipha amantongomane abunjiwe futhi agugile, amabhulokhi kanye nama-fasteners ezimotweni, amaloli, ezolimo, ukulungiswa kwesikebhe.
I-Mini handheld inductor heater-handheld ductor heuct-Magnetic Inductor. I-KIA-1000W isebenzisa amandla kazibuthe Ukushisa ukufakelwa ubuchwepheshe bokushisa busebenzisa izingxenye ezincane ezimotweni, emishini, ezingxenyeni ezihlukene zensimbi ne-polyethylene. Isetshenziselwa kakhulu ukushisa amabhulokhi ahlukahlukene ezimoto, amantongomane, amagiya, ama-Pulleys, ama-pulleys, ama-bearings, izinzwa, njll. Akunalangabi elivulekile, asikho isidingo sokugwema izinto ezivuthayo ezinhlobonhlobo njengamapulasitiki; akukho ukupholisa kwamanzi, ukusebenza okuphephile, ukusetshenziswa okulula futhi okulula ukuthwala.
Ukushisa okuzinzile, kulula ukuyisebenzisa ngaphandle nangaphakathi endlini. Akukho ukushiswa, ukuvikelwa kokuphepha kwezinye izingxenye, ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi. Akuzilimazi izingxenye eziseduze kokushisa. Ngeke zilimaze izingxenye eziseduze nenjoloba noma ipulasitiki. Alikho ilangabi elivulekile. Isimiso: Ukusetshenziswa kwensimbi nokushisa okungeyona insimbi emkhakheni we-electromagnetic kungaguqula isikulufa kube obomvu induction lokushisa idivayisi ngemizuzwana engama-20. Akukho ukushisa komlilo okuvulekile ukuqinisekisa ukuphepha kokusebenza kwakho. Izinto zokwenziwa enjoloba nezinamathelayo nazo zingashiswa futhi zithwetshulwe yizinsimbi zensimbi. Isikali sokusetshenziswa: ukukhishwa kwesikulufu semishini yamandla kagesi, ukukhishwa kwesikulufa kwemishini kagesi ephezulu, ukushintshwa okuqinile kwes screws, isikulufa ukususwa kwama-transformers, ukususwa kwesikulufa ezikhundleni ezahlukahlukene, ukususwa kwemivimbo ye-vinyl ngaphandle kwe-solvent noma irabha, ukususwa kwe-hoses kanye ne-AC umzila , ukufudumeza nokwandisa ukuthwala Ubuncane bebhande kwenza kube lula ukufaka, ukugqwala, nokususwa kwesikulufa, futhi kungasetshenziswa ekuhlukaniseni izimboni ezahlukahlukene kanye nemishini.
Lo mshini awulungele kuphela isitolo sokulungisa izimoto, isitolo se-4S, isitolo sokulungisa izithuthuthu, ukulungiswa kokukhiqizwa kwefektri, ukulungiswa kwemishini, ukulungiswa kwemishini, umsebenzi wokulungiswa kwephiko, umnyango wezinto, isitolo sezinto zekhompiyutha , Ukwelashwa okushisa kwezingxenye ezincane, inani elincane lensimbi eyigugu (igolide, isiliva, njll.) Ukunyibilika, inani elincane lokuncibilikisa insimbi engenacala, njll.
Ama-disassembly ezinobukhulu obuhlukahlukene be-rusty screw bolts.
Ukwelashwa okushisa kwamabholithi okugqwala kwemoto, amantongomane, amagiya, ama-pulleys, ama-pulleys, ama-bearings.
Ukwelashwa okushisa kwamathuluzi we-hardware imishini ephezulu yokucisha umshini, njenge-vise, isando, amapayipi, i-wrench.
Ukushisa nokusabalalisa kwemigqa yokukhiqiza ehlukahlukene, imishini yokusebenza, izingxenye zensimbi enembile.
Imvamisa ephezulu yokuqeda ukushisa kokushisa kwama shafts e-gear ehlukahlukene ahlukahlukene.
Ukushiswa kwe-carbide kwakubona izindwani ezinamazinyo amakhulu namancane.
Uhlaka lwesiliva, izingxenye zokufudumeza i-annealing.
Ukushiswa kwamawashi obucwebe.
Umkhakha wama-elekthronikhi: izintambo ezihamba kahle kakhulu, izingxenye ezahlukahlukene ze-elekthronikhi, izingxenye ezinhle, ukuthengiswa kwesiliva kanye nesiliva.
Umkhakha weMishini nowokuphehla ugesi: amajoyinti wensimbi ocolekileyo, ama-motors esiliva-zethusi esenziwe ngesiliva, amasheya nokunye ukucima kanye nokushaya.
Imboni yezintambo: umucu wensimbi ukufakwa kwe-induction.
Imboni yamathoyizi: Izicucu ze-Clockwork ezondile ziyalungiswa.
Ukushiswa kwemimese: Imimese yamaphepha nezicucu zezicucu kuyacishwa.
Amathuluzi ahlukahlukene okhuni, njenge: izembe, i-planer nokunye ukwelashwa okushisa
Izakhi ze-hydraulic ezifana ne-plunger yepompunger pump, i-rotor yepompo ye-rotor, ukubuyisela shaft kumavalvu ahlukahlukene, gear gear pump nokunye ukucisha okuvama kakhulu.
Ukwelashwa okushisa kwemishini ehlukahlukene yokucima umusi kanye nesithuthuthu, njengokuthi: crankshaft, induku yokuxhuma, iphini le-piston, i-camshaft, i-valve, amagiya ahlukahlukene egokisini lamagiya, imfoloko ehlukahlukene, imigqa ehlukahlukene yolayini, ukudluliswa okuphezulu kokujeziswa okuphezulu kokuqeda imishanguzo ehlukahlukene, okuhlukahlukene izikhonkwane ezincane shaft crank, izingalo ze-rocker ezahlukahlukene, imigodi ye-rocker, njll.
Lo mkhiqizo ungashiswa ngama-800 degrees khona manjalo, akukho mlilo ovulekile owenziwe, akukho kupholisa kwamanzi kuyadingeka, futhi ukusebenza kuyasebenza.
Uma kungonakalanga ngamabomu noma kungasebenzi kahle, umkhiqizo uqinisekiswa unyaka ongu-1
Amandla okusebenza Isigaba esisodwa110v, 50Hz / 60Hz
Isigaba esisodwa 220V, 50Hz / 60Hz
Ububanzi bokusebenza kwamandla 100V-120V
Amandla wokukhipha 1KW
Imvamisa eguquguqukayo I-30-100KHZ
Okokukhipha kwamanje 10A
Iphuzu lokuvikela ukushisa 85 ℃
Certification I-CE, UL, CCC, Iyatholakala nge-COC, POVC
Usayizi 380mm * 64mm
Izesekeli ziza ne-Mini Induction heater.
I-Dia 30mm Coil 2 izingcezu
I-Dia 40mm Coil 2 izingcezu
I-Dia 50mm Coil 2 izingcezu
Ubude be-750mm ikhebula lekhoyili ye-DIY 2 izingcezu
Amakhoyili wokushisa i-Plate 2 izingcezu
I-heat-induction ye-induction 6KW